Sidee Al-Shabaab ku galeen hotel SYL, maxaase kadib ka dhacay gudaha? | Xaysimo
Home War Sidee Al-Shabaab ku galeen hotel SYL, maxaase kadib ka dhacay gudaha?
Abaaro 7:00-pm habeenimo ee caawa dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa gudaha u galay Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, kaas oo ku dhex yaalla xeyn daabka laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya.
Weerarkan oo ka duwanaa kuwii looga bartay Al-Shabaab oo ku bilaaba jiray qaraxyo is miidaamin ah oo hadba meeshii ay galayaan dagaalyahanadoodu uga hor mari jiray, ayaa waxaa fuliyey shan nin oo soo xirtay Tuutaha ciidanka booliska dowladda Soomaaliya.
Hotelka waxaa ka dhaceysay labo xafladood oo mid aheyd bandhig bookaag lagu soo bandhigaayey, halka tan kale ay aheyd casho sharaf loo sameynayey siyaasiyiin iyo wax-garad maanta Muqdisho uga qeyb galay caleema saarka guddoomiyaha midnimada beelaha Habargidir Prof Cabdulqaadir Maxamed Shirwac.
Mid ka mid ah sarakiisha hoggaaminaysa ciidamada ilaalada Madaxtooyada ee ku howlan soo afjaridda weerarkaas ayaa sheegay in seddaxda dagaalame ay ciidamadu uga hor mareen qeybta sare ee Hotelka, halkaas oo sida uu sheegay ay doonayeen inay ka dagaalamaan.
“Waxaan joognay meel aan ka fogeyn hotelka markaan fahanay in la galay hotelka waxaan degdeg ku galnay hotelka ugu horeyntiiba waxay in dhaheygu qabteen meydadka seddax oday oo yaalla banaanka hore ee hotelka, gudaha ayaa sii galnay waxaan aragnay ilaaladii hotelka oo dagaalamaya iyo ragii oo u gudbay gudaha, waxaan jaranjarooyin ku fuulnay qeybta kore ee hotelka”, ayuu yiri sarkaalku.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, “Markii aan xaqiijinay inaysan u gudbin kor waxaan u soo degnay hoos qeybta dhexe ayaan uga hor nimid oo ay cabaar nagula dagaalameen, wax yar kadib waxay isku dayeen inay hoos u dagaan oo baxsadaan askari ka tirsan ilaaldii hotelka ayay hoos ku dileen waxayna isku dayeen inay ka boodaan derbiga danbe, hal mid ayaan halkaas uga dilnay waxaana soo haray labo kale oo aad u hubeysan waxyar ka dibna bam gacmeed ayay nagu soo ridayeen” ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka la tacaalaya weerarka.
Sarkaalkan oo dalbaday inaan adeegsan magaciisa ayaa sheegay in labadii nin ee soo hartay ay galeen guri danbe oo shub ah hub kasta oo loo adeegsadana uusan waxba ka tareyn, halkaas oo ay ka soo ridayaan rasaas iyo bambaanooyin culus oo ay wataan.
Labadaas dagaal-yahan ayaa haatan weli ku jira hotelka, inkasta oo la xakameeyey waxyeeladooda lana soo badbaadiyey inta badan dadkii ku sugnaa hotelka.